उच्च रक्तचाप यसरी नियन्त्रणमा राख्ने ? - Samudrapari.com
उच्च रक्तचाप यसरी नियन्त्रणमा राख्ने ?
काठमाडौं – उच्च रक्तचापका बिरामीको संख्या बढिरहेको छ । यसले विभिन्न रोग तथा समस्यालाई निम्ता दिइरहेको हुन्छ । उच्च रक्तचाप किन जटिल समस्या हो ? यसलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने ?
० नुनिलो, चिल्लो, गुलियो र मसलेदार खानाबाट टाढै रहनु राम्रो हुन्छ । सामान्य खानपानले उच्च रक्तचापलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
० मोटोपन पनि उच्च रक्तचापको एउटा प्रमुख कारण हो । दैनिक ४५ मिनेटजति हिँड्दा वा जुनसुकै किसिमका व्यायाम गर्दा उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा फाइदा पुग्छ ।
० मदिरापान नगर्नु वा ज्यादै कम मात्र गर्नु, धूमपान त्याग्नु पनि उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका महत्वपूर्ण उपाय हुन् ।
० उच्च रक्तचापले शरीरका अन्य महत्वपूर्ण अंगलाई पनि निकै छिटो क्षति पु¥याउने भएकाले समस्या भइसकेका व्यक्तिले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्छ ।
० उच्च रक्तचापका लक्षण देखिए मुटुरोग विशेषज्ञलाई देखाउनु राम्रो हुन्छ । तर, तत्काल मुटुरोग विशेषज्ञ उपलब्ध नभए जनरल फिजिसियनसँग पनि उपचार गराउन सकिन्छ ।